« Can 2017 » any Gabon : tafakatra amin’ny dingana manaraka i Sénégal sy Ghana | NewsMada
« Can 2017 » any Gabon : tafakatra amin’ny dingana manaraka i Sénégal sy Ghana
Nanaporofo ny maha ekipa lehibe azy eo amin’ny Can aty Afrika taranja baolina kitra. Efa azo antoka ny hiakaran’ny ekipan’i Sénégal sy ny Kintana maintin’i Ghana amin’ny dingana manaraka. Nandresy hatrany izy ireo. Mbola ho sarotra kosa ny lalana ho an’ireo ekipa heverina fa goavana.
Mazava ny lalan’ny Lion de la Téranga. Nandresy hatrany ireo mpifanandrina aminy izy teo amin’ny andro roa vitany ka hiakarany amin’ny ampahefa-dalana. Nanamontsana an’i Tonizia 2 noho 0 ary mbola nandresy tamin’io isa ihany koa nanoloana an’i Zimbaboe. Manana isa enina. Hihaona amin’ny laharana faharoa, ahitana an’i Gabon, i Borkina Faso, i Kameronina ary i Ginea Bisao eo amin’ny sokajy A ny senegaley eo amin’ny ampahefa-dalana.
Ho an’ny sokajy D kosa, malalaka ny lalan’ny Ganeanina taorian’ny fandresena indroa miantoana vitany tamin’ity Can ity. Nandresy 1 noho 0 avy an’i Oganda sy Mali izy ireo. Manana isa enina koa izy ireo ary hifanandrina amin’ny laharana faharoa ao amin’ny sokajy C. Izany hoe, mety hihaona amin’ny laharana faharoa, ahitana ny RD Kongo, Maraoka, ny Elefanta Ivorianina ary i Togo.
Nifoha amin’ny torimasony
Ankoatra izany, niditra tamin’ny andro fahatelo ny lalao, omaly. Samy manomboka amin’ny 10 ora alina, ampiarahina avokoa ny fihaonana rehetra. Hifanandrina ao amin’ny sokajy B, i Alzeria sy i Sénégal ary ankilany i Tonizia sy i Zimbaboe. Miankina amin’izany avokoa ny hoavin’ireo ekipa sasany. Anisan’izany ny Gaboney, mpampiantrano, ao amin’ny sokajy A. Mety mbola hiakatra amin’ny dingana manaraka koa ny Maraokanina satria nifoha amin’ny torimasony ka manana isa telo izao ao amin’ny sokajy C. Miaraka aminy ao ny Elefanta ivorianina, manana isa roa hatreto. Manomboka maka ny toerany koa ny Faraonan’i Ejypta. Nibata impito ny Can ary tsy hita firy intsony raha tsy izao indray.
Araka izany, manomboka ho henjana avokoa ny fihaonana rehetra.